Abafundi bavale umgwaqo | News24
Abafundi bavale umgwaqo
Kungesikhathi abafundi base-Unisa beteleka ngoLwesibili.ISITHOMBE: lethiwe makhanya
KUPHAZAMISEKE ukufunda esikhungweni semfundo ephakeme i-Unisa ngoLwesibili kulandela isiteleka sabafundi bakuyo lenyuvesi.
Laba bafundi bavuke umbhejane bavala umgwaqo ngamathayi avuthayo kwaphazamiseka ukuhamba kwezimoto emgwaqeni uLangalibalele.
Abafundi bathi abeneme ngemiphumela yabo abayithole kule nyuvesi yange-semester ka-May/June.
Bathi ayijabulisi kanti futhi sebefuna ukubuyiselwa amaphepha akade bebhale kuwo ukuze bezozibonela ngamehlo ukuthi bekumakwa kanjani.
Lesi siteleka siqale ngoLwesihlanu olwedlule kodwa akuzange kuvalwe umgwaqo.
Kube nalesi siteleka nje abaholi babafundi kule nyuvesi abekho basePitoli nokuyilapho bezama khona ukuthola izixazululo ngezinkinga ezibhekene nabafundi.
Ngokuthola kwe-Echo abaholi babafundi selokhu bahamba ngoLwesine ngesonto eledlule. Ngokusho kwabafundi, abaholi baba nemihlangano zonke izinsuku kodwa asiphumi isixazululo. UNobhala we-Sasco esiFundeni uMgungundlovu uMnu Sihle Khwela uthe inkinga enkulu ababhekene nayo ukuthi kukhona abafundi abangakayitholi imiphumela yabo kanti nalabo abayitholile ihleli ishintshashintsha njalo. Uthe impilo imile kubafundi abangakayitholi imiphumela yabo ye-semester ka-May/June.
“I-Unisa idlala ngathi singabafundi. Abafundi abangakayitholi imiphumela yabo abakwazi ukubhalisela isigaba esilandelayo sokufunda. Nalabo asebeyitholile nabo bahlalele ovalweni ngoba njalo imiphumela iyashintsha uma ngabe beyibheka.
“Ufike ungene kwi-system ekuseni kuvele ukuthi uphasile uma usuthi uyabheka futhi ntambama okanye ngosuku olulandelayo sekuvela ukuthi ufeyilile.
“Asazi ukuthi kwenzakalani ngoba nabaphathi benyuvesi nabo abasinikezi izimpendulo ezicacile ukuthi kungani imiphumela ilokhu ishintshashintsha,” kubeka yena.
Uqhube wathi bengabafundi sebefuna ukuzibonela bona amaphepha ezivivinyo zabo ezimakiwe ukuze bezogculiseka ngemiphumela abanikwa yona.
“Ngaphambilini vele besingawanikwa esandleni amaphepha akade siwabhala kodwa indlela esekwenzeka ngayo manje iyona eyenza ukuthi sithi sifuna ukuzibonela ukuthi ngempela le miphumela esinikwa yona iyiyona yini,” kubeka yena.
Ngaphandle kwenkinga yemiphumela abafundi baphinde bathi bafuna ukuba kuhlehliswe isikhathi sokuhanjiswa komsebenzi kanye nowokubhala izivivinyo ukuze kuzokwamukeleka nalabo abangakazitholi izimpendulo zabo ku-NSFAS. Laba bafundi bathi kukhona abafundi abangakabhalisi kodwa inyuvesi isifuna ukuthi kuhanjiswe umsebenzi wesikole ekubeni bengenaso isikhathi esanele.
Isikhungo se-Unisa esiseMgungundlovu akusona kuphela ebesivaliwe njengoba naseThekwini kade bevalile bekhala ngezinkinga ezifanayo.
Okhulumela lenyuvesi uMnu Siyabonga Seme ukuqinisekisile ukuthi kuphazamisekile ukufunda kulesi sikhungo. Uthe abafundi bakhala ngokuthi bafuna ukunikezwa amaphepha abo ababhale kuwo izivivinyo ukuze bezozibonela imiphumela baphinde banikezwe nesikhathi esanele sokwenza umsebenzi ngemuva kokubhalisa.
“[Izingxoxo phakathi] kweziphathimandla zenyuvesi kanye nabaholi babafundi ziyaqhubeka kusukela ngesonto eledlule ngesikhathi kuqala isiteleka. Izinsolo zokuthi imiphumela yabafundi iyashintsha njalo angeke ngize ngikwazi ukuyiqinisekisa,” kubeka yena. Okhulumela amaphoyisa esifundazweni saKwaZulu-Natal uLieutenant Colonel Thulani Zwane uthe kuvulwe icala lokudala udlame emphakathini kodwa bekungakaboshwa muntu.